Nkọwa ngwaahịa - Chain Supply Next
Itufu bụ otu ụdị azụmaahịa ama ama n’oge a. O guzosie ike dị ka ọrụ dị mkpa na obere itinye ego na mgbanwe. NextsChain bụ otu onye na-eweta azụmaahịa dị otú a, nke na-arụ ọrụ dị ka ikpo okwu dị mma iji bido azụmaahịa ị na-atụfu n'efu na mba ụwa.
Nextschain họpụtara ọtụtụ puku ndị na-eweta ngwaahịa dị elu na-enye ngwaahịa dị elu maka ire ere na ọnụ ahịa ahịa ahịa. Nextschain nwere ụdị dị iche iche maka ndị ahịa na-eji Shopify APP, na-enyere ha aka ịhọrọ ọtụtụ puku ngwaahịa na-emeri site na katalọgụ ha ma tinye ya na ụlọ ahịa ha.
Nextschain bụ Ngwọta E-azụmaahịa E-akwụsị maka Dropshipping, nke na-enye ndị ọrụ ohere ilekwasị anya na akụkụ ahịa na azụmaahịa, ebe ndị ọkachamara ha na-ejikwa ngwaahịa na usoro mbupu. Mgbe ị nwesịrị ahịa, ihe niile onye ọ bụla ga-eme bụ ịkwụ ụgwọ na NextsChain ga-emezu iwu gị wee bute ngwugwu usoro iji ngwa ngwa ngwa ngwa, ma nyefee nọmba nsuso na iwu gị. Dịka eziokwu, NextsChain na-enyere ndị ahịa anyị aka ịchekwa ihe dịka 80% nke oge gị.
N'ihi asọmpi sara mbara, iwulite aha ahụ abụrụla ihe dị oke mkpa maka azụmaahịa. Na Nextschain, ndị ọrụ nwere ike ibipụta akara ngosi nke nhọrọ ha na igbe nkwakọ ngwaahịa iji pụta na asọmpi ahụ. N'ihi nke a, ndị ahịa nwere ike iwulite ntụkwasị obi na ndị ahịa ha ogologo oge wee nwee ọ loyaltyụ ntụkwasị obi nke ndị ahịa.
Nextschain apụtawo dị ka otu n'ime ụdị ntụkwasị obi a tụkwasịrị obi na ahịa ụwa. Nlekọta ndị ahịa ha na-enye ọrụ kacha mma post-sales. Maka iwulite ọnụnọ n'ịntanetị, ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị ọsọ iji bido na ntinye ego dị ala. Site na ọrụ mgbagha nke Nextschain, ndị ọrụ nwere ike ilekwasị anya na mma yana ogo ma bulie azụmaahịa ha.